Kudzora Kwehunhu - Chengdu Zhengxi Hydraulic Equipment Kugadzira Co, Ltd.
Chengdu Zhengxi hydraulic yekudhinda inogadzira inogadzira zvakakwana iyo ISO9001 yemhando sisitimu uye yakanyatso shandisa matatu kuongororwa mukugadzirwa, iko mbishi kuongorora, maitiro kuongorora, uye fekitori kuongorora; matanho akadai sekuzviongorora-wega, kuongorora pamwe, uye kuongorora kwakasarudzika kunogamuchirwawo mukugadzirwa kwekuparadzira maitiro kuona mhando yechigadzirwa. Ita shuwa kuti izvo zvisingaenderane zvigadzirwa hazvisi kusiya fekitori. Ronga kugadzirwa mukuomerera zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi uye zvinoenderana nenyika zviyero, kupa zvigadzirwa, uye kuona kuti zvigadzirwa zvinopihwa zvigadzirwa zvitsva uye zvisina kushandiswa, uye zvinogadzirwa nemidziyo yakakodzera mbishi uye tekinoroji yepamusoro kuona kuti mhando yechigadzirwa, maratidziro uye kuita zvinoenderana zvinoda mushandisi. Zvinhu zvacho zvinotakurwa nenzira yakakodzera, uye kurongedzwa nekumakwa zvinoenderana nemitemo yenyika pamwe nezvinodiwa nevashandisi.
Yakanaka Policy, Chinangwa, Kuzvipira
Mutengi kutanga; mhando kutanga; kuomesa maitiro maitiro kugadzira yekutanga-kirasi mhando.
Kwevatengi kugutsikana mwero inosvika 100%; nguva yekuendesa yakatarwa inosvika 100%; maonero evatengi anogadziriswa uye anopindurwa 100%.
Kugadzira Workshop Imwe
1. Hunhu system. Kuti ubudirire kudzora zvinhu zvinokanganisa chigadzirwa tekinoroji, manejimendi nevashandi kudzivirira uye kubvisa zvisina kukodzera zvigadzirwa, kambani yakaumba mhando yemhando gwaro nenzira yakarongwa uye yakarongeka, uye ikariteedzera kwazvo kuti ive nechokwadi chekuvimbiswa kwemhando Sisitimu inoenderera ichishanda .
2. Dhizaini yekugadzira: kuona kuti chigadzirwa dhizaini nekusimudzira zvakarongedzwa uye zvaitwa maererano nemaitiro ekugadzirisa maitiro kuona kuti chigadzirwa chinosangana nematanho akakosha emunyika nezvinodiwa nemushandisi.
3. Kudzora kwemagwaro uye zvigadzirwa: Kuti uchengetedze kuzara, kurongeka, kufanana uye kushanda kwezvinyorwa zvese zvine chekuita nehunhu uye zvigadzirwa zvekambani, uye kudzivirira kushandiswa kwemagwaro asiri echokwadi kana asiri iwo, kambani inonyatso kudzora magwaro uye zvigadzirwa.
4. Kutenga:Kuti uwane zvinodikanwa zvemhando yepamusoro yezvigadzirwa zvekupedzisira zvekambani, kambani yakanyatso kudzora kuwanikwa kwezvinhu mbishi uye zvekubatsira uye zvekunze zvikamu. Yakasimba kutonga pamusoro pevadzidzi kuferefeta ongororo uye kutenga nzira.
5. Kuzivikanwa kwechigadzirwa:Kuti udzivise mbishi uye zvekubatsira zvinhu, zvikamu zvekunze, zvigadzirwa zvakapetwa uye zvigadzirwa zvakapedzwa kubva mukusanganiswa mukugadzira nekutenderera, kambani yakaratidza nzira yekumaka zvigadzirwa. Kana zvinodiwa zvekuteedzera zvatsanangurwa, chimwe nechimwe chigadzirwa kana batch yezvigadzirwa zvichave zvakasarudzika.
6. Maitiro ekudzora: Iyo kambani inobudirira inodzora yega yega maitiro inobata chigadzirwa mhando mune yekugadzira maitiro kuti ive nechokwadi chekuti chekupedzisira chigadzirwa chinosangana nezvinotsanangurwa zvinodiwa.
7.Kuongorora uye kuyedza: Kuti uone kana zvinhu zvakasiyana mukugadzirwa zvinogutsa zvinodiwa, kuongorora uye bvunzo zvinodiwa zvinotsanangurwa, uye zvinyorwa zvinofanirwa kuchengetwa.
A. Kutenga kuongorora uye kuyedza
B. Maitiro ekuongorora uye bvunzo
C. Kuongorora kwekupedzisira uye kuyedza
Kudzora kwekutarisa, kuyera uye bvunzo michina: Kuti uve nechokwadi chekuongorora uye kuyera uye kuvimbika kweiyo kukosha, uye nekuita zvinodiwa mukugadzira, kambani inotaura kuti kuongorora, kuyera uye bvunzo michina inodzorwa, kuongororwa uye kugadziriswa zvinoenderana nemirau.
Kugadzira Musangano 2 (Yakakura Lathe)
1. Kudzora kwezvisina kukodzera zvigadzirwa: Kuti udzivise kuburitswa, kushandiswa uye kuunzwa kwezvisina kukwana zvigadzirwa, iyo kambani ine yakaoma mirawo pane manejimendi, kuzviparadzanisa uye kubata kwezvisina kukodzera zvigadzirwa.
2. Nzira dzekugadzirisa uye dzekudzivirira: Kuti ibvise izvo chaizvo kana zvingangove zvisina kukodzera zvinhu, kambani yakanyatso gadzirisa ekugadzirisa uye ekudzivirira matanho.
3. Kufambisa, kuchengetedza, kurongedza, kuchengetedza uye kuendesa: Kuti uve nechokwadi chekutenga kwekunze uye zvigadzirwa zvakapedzwa, kambani yakagadzira zvinyorwa zvakaomarara uye zvine hungwaru zvekubata, kuchengetedza, kurongedza, kuchengetedza uye kuendesa, uye zvakanyatso kudzora.